काठमाडौंमा खुकुलो निषेधाज्ञा– के गर्न पाइन्छ, के पाइँदैन? (सूचीसहित) :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
काठमाडौंमा खुकुलो निषेधाज्ञा– के गर्न पाइन्छ, के पाइँदैन? (सूचीसहित)
स्वास्थ्यखबर आईतबार, जेठ ३०, २०७८, १९:३५:०२
काठमाडौं– कोरोना भाइरस संक्रमणको 'चेन ब्रेक'का लागि भनेर काठमाडौं उपत्यकामा लागू गरिएको निषेधाज्ञा फेरि १ हप्ताको लागि थपिएको छ।
औषधि, खाद्यवस्तु तथा अन्य अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु वा सेवा खरिदको कामका साथै अत्यावश्यक सेवा लिनु पर्दा बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घर वाहिर ननिस्किने।
औषधि, तरकारी, फलफूल, खाच्यान्न, दुध डेरी, मासु, खानेपानी, ग्यास पसल, किराना सल, डिपार्टमेन्टल (ग्रोसरी), पुस्तक पसल, कृषि मल, वीउ, कृषि औजार र निर्माण सामग्रीका पसल बाहेकका अन्य पसलहरु संचालन गर्न नपाउने।
औषधि, खाद्यवस्तु तथा अन्य अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु वा सेवा खरिदको कामका साथै अत्यावश्यक सेवा लिनु पर्दा मात्र घरबाट बाहिर निस्कन सक्ने।
ट्रान्सपोर्ट कम्पनीहरुले औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण, अक्सिजन सिलिण्डर, कृषि मल, बीउ तथा खाद्यान्न सामग्री ढुवानी गर्दाको समयमा मात्र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी कार्यालय संचालन गर्ने।
३) औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री, अत्यावश्यक खाद्य सामग्री तथा अन्यको हकमा:
औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री सम्बन्धी पसल जुनसुकै समयमा निर्बाध रुपमा संचालन गर्न पाइने।
अत्यावश्यक सेवाहरु जस्तै एम्बुलेन्स, खानेपानी, विद्युत मर्मत सम्भार, स्वास्थ्य सम्बद्ध (औषधि, अक्सिजन सिलिण्डर), दूरसंचार, इन्टरनेट मर्मत, कार्गो, कुरियर तथा डाँक सेवा र फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी ढुवानी तथा यातायातका साधनमा ब्यानर वा प्रिन्टमा विषय उल्लेख गरी संचालन गर्न पाउने।
प्रिन्टिङ प्रेसमा काम गर्ने, सुरक्षा सम्बद्ध कर्मचारी तथा औषधि आपूर्ति गर्ने परिचय बाहक व्यक्तिको हकमा सम्बद्ध निकाय तथा आपूर्तिकर्ताको अनुमति पत्र भए सवारी पास नचाहिने। सुरक्षा गार्डहरुको हकमा परिचय पत्र र पोशाक लगाएर ड्युटी आवत जावत गर्न पाउने।
आज भुटानबाट ३ लाख डोज एस्ट्राजेनेका खोप नेपाल आउँदै उक्त खाेप ३ लाख डोज एस्ट्राजेनेका प्राथमिकताका आधारमा ज्येष्ठ नागरिकलाई लगाइने छ। कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लगाएका करिब १३ लाख ज्येष्ठ नागरिकले ४ महिनादेखि दोस्रो डोज लगाउन पाएका छैनन्। ५२ मिनेट पहिले
आज भुटानबाट ३ लाख डोज एस्ट्राजेनेका खोप नेपाल आउँदै ५२ मिनेट पहिले